Fanaan - Wikipedia
Fanaan (Af Ingiriis : singer; Reer aw xasan waa beel kamid ah‎) waa heesaa, jilaa, iyo qof muusigga yaqaan. Fanaanka waxaa badanaa loogu yeeraa, qof xirfaddiisa shaqo heesaha iyo muusikada tahay. Haweeneyda waxaa loogu yeeraa "fanaanad", ninkana "fanaan". Guud ahaan, fanaanku waa qofka ku codeeya hees, gabay, geeraar, tix, iyo tiraab. Waxaa jira shakhsiyaad gaar ah oo leh xirfad ka baxsan heesida, sida dadka halabuurka leh (abwaan), majaajilada fiican leh, ciyaarta qoob-ka-ciyaarka yaqaana (dance), ama garaaci kara qalabka muusiga (sida kabanka, durbaanka, turunboda iwm).
Hogaanka Bahda Fanka SoomaaliyeedEdit
Last edited on 4 Jannaayo 2022, at 01:59
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 4 Jannaayo 2022, marka ee eheed 01:59.